Imaaraadka oo bilaabay masaafurinta dad ka soo jeeda dalka Jabuuti. – Awdal State Economic and Political Council
[ January 28, 2019 ] Saudi Arabia frees Ethiopian-born tycoon amid flurry of releases	Popular Videos
[ January 28, 2019 ] Nuxurka khudbadii Suldaan Dhawal uu ka jeediyay shikii qawmiyada Gada Buursi, Aw Barre, Itoobiya	Popular Videos
[ January 28, 2019 ] Nuxurka khudbadii Ugaaska qawmiyada Gada Buursi, Aw Barre, Itoobia	Popular Videos
[ January 28, 2019 ] Suldan Wabar oo ka qeeyb galay shirka qawmiyada Gada Buursi, Aw Barre Itoobiya	Popular Videos
[ January 28, 2019 ] Nuxurka Qudbadii Suldan Ibrahim Jama Samatar ee Qawmiyada Gada Buursi, Aw Barre Itoobia	Popular Videos
Awdal State Economic and Political Council
HomeWararka SoomalidaImaaraadka oo bilaabay masaafurinta dad ka soo jeeda dalka Jabuuti.
Imaaraadka oo bilaabay masaafurinta dad ka soo jeeda dalka Jabuuti.
March 15, 2018 Wararka Soomalida
Imaaraadka oo Bilaabay musaafurinta Muwaadiniin kasoo jeeda dalka Jabuuti
Muqdisho (Kalshaale) Dowlada Imaaraadka Carabta ayaa bilowday in dalkeeda ay ka erido Muwaadiniinta kasoo jeeda dalka Jabouti, kadib go’aankii ay dowlada Jabouti dalkeeda uga ceydhisay Shirkada DP World.
Dowlada Imaaraadka, gaar ahaan Wasaarada arrimaha Gudaha ayaa muwaadiniinta Jabouti ku wargalisay inay isaga baxaan dalka marka ay dhameystaan wakhtiga uga harsan sharciga dal ku jooga.
Qeybta dowlada Imaaraadka Carabta u qaabilsan ajaaniibta ayaa boqolaal muwaadiniin Jabuutiyaan ah ka eriday dalka, kuwaa oo ceyrintooda ay kusoo beegmatay xili ay dowlada Jabouti ku dhawaaqday go’aanka ay dalkeeda uga erida DP World.
Dowlada Jabouti ayaa arrin sahlan ku sheegtay in Imaaraadka uu qaado talaabo ceynkaasi ah, maadaama ay diidmo ka muujiyeen howlaha shirkada DP World.
Madaxweynaha dalka Jabouti Ismaaciil Cumar Geele oo la gaarsiiyay Jawaabta ka dhalatay eryinta DP World ayaa soo dhaweeyay ficilka dowlada Imaaraadka Carabta, waxa uuna tilmaamay in dadka la eryinaayo aysan heyn dal la’aan.
Dhammaadka bishii tagtay dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday iney ka laabatay heshiiskii ay kula jirtay Shirkada DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraatka Carabta Carabta.
Dowlada Jabuuti waxa ay ku eedeysay maamulka Shirkada DP World amar ku taagleyn iyo inay garan weyday in dhulka lagu heshiiyay uu yahay dhul Jabouti.
RW Khayre oo soo abaabulay mooshinka ka dhan ah Gudoomiyaha Baarlamanka Jawaari.
DP World stresses commitment to “Somaliland”
Saudi Arabia frees Ethiopian-born tycoon amid flurry of releases
Wasiiru Dawlihii Hore ee Arimaha Dibada ee Jamhuuriyada Soomaaliyeed oo ka hadlaaya dagaalka Tukaraq
Daawo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo Masar ugu dhaartay in aan biyaha laga carqaladayn doonin
Daawo Siyaasi Mawliid Daahir Alaale oo si adag uga hadlay sadexda wasiir ee Muuse Biixi qaadhanka Tukarag uga ururinaya Borama.
Daawo Dhismaha Iyo Dayactirka Kasocda Madaxtooyada Villa Soomaaliya oo loo dhisay hab casri ah iyo Qalab Amaanka Baabuurta baadhaya oo dhulka loogu Aasay
DaawoWasiirka maaliyada xukuumada Soomaaliya oo shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa oo ka hadlay wax-yaabihii u qabsoomay bishii la soo dhaafay ee May.
Archives (Keeydka) Select Month January 2019 December 2018 November 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016